Ungalisebenzisa njani iShishini lakho, iSiza, kunye neApple ngokuKhangela kweApple | Martech Zone
Iindaba zeApple ziyirampula iinzame zeinjini yokukhangela ziindaba ezimnandi ngokoluvo lwam. Ndandihlala ndinethemba lokuba uMicrosoft angakhuphisana noGoogle… kwaye wayedanile kuba iBing ingazange ifumane mpumelelo. Ngehardware yabo kunye nesikhangeli esifakelweyo, unokucinga ukuba banokubamba isabelo sentengiso ngakumbi. Andiqinisekanga ukuba kutheni bengenalo kodwa uGoogle ulawula ngokupheleleyo intengiso nge-92.27% ukwabelana kwimakethi… Kwaye iBing ine-2.83% kuphela.
Ndingu-fanboy ka-Apple ishumi leminyaka, enkosi kumhlobo olungileyo endithengela enye ye-AppleTV yokuqala. Xa isoftware endiyisebenzeleyo ifuna ukwamkelwa kweApple, mna (kunye nomhlobo wam uBill) apho abantu bokuqala ababini kwinkampani basebenzise iiLaptops zeMac. Khange ndijonge ngasemva. Uninzi lwabantu endibaziyo abagxekayo iApple luza kugxila kwimveliso ethile kwaye baphose umfanekiso omkhulu… iApple ecosystem. Xa usebenzisa iintlobo zeemveliso ze-Apple ekhaya okanye emsebenzini, amava angenamthungo, ukudityaniswa, kunye nokusetyenziswa kuzo zonke akunakuthelekiswa nanto. Kwaye akukho nto uGoogle noMicrosoft abanokukhuphisana nayo.
Isakhono seApple sonyusa ukuchaneka kweziphumo zam zokukhangela ngokusekwe kweyam I-iTunes, i-AppleTV, i-iPhone, i-Apple Pay, i-Mobile App, i-Safari, i-Apple Watch, iMacBook Pro, kunye neSiri Ukusetyenziswa- zonke zidityaniswe ngeakhawunti enye yeApple- azinakuthelekiswa nanto. Ngelixa uGoogle egxile ngaphandle kwizikhombisi zokumisela… iApple inokusebenzisa idatha efanayo, kodwa ke udibanise iziphumo nokuziphatha kwabathengi babo ukuqhuba ukujolisa okungcono kunye nokwenza ubuqu.
Injini yokukhangela ka-Apple sele ibukhoma
Kubalulekile ukuba uchaze ukuba i-injini yokukhangela ye-Apple ayisengawo amarhe. Ngezihlaziyo zamva nje zokusebenza kweApple, iApple Ukubonakala inikeza ukukhangela kwi-intanethi ebonisa iiwebhusayithi ngokuthe ngqo - ngaphandle kokusebenzisa nayiphi na injini yokukhangela yangaphandle.
U-Apple uqinisekisile ukuba iyarhubuluza kwiwebhu sayithi ngo-2015. I-Siri yinxalenye ye-iOS, i-iPadOS, i-watchOS, ii-macOS, kunye neenkqubo zokusebenza ze-tvOS zisebenzisa imibuzo yezwi, ulawulo olusekwe kwimpawu, ukujonga umkhondo, kunye nonxibelelwano lomsebenzisi wolwimi lwendalo ukuphendula imibuzo, ukwenza izindululo kunye nokwenza iintshukumo.
Amandla amakhulu kaSiri kukuba ahambelana nokusetyenziswa kolwimi lomntu ngamnye, ukukhangela kunye nokukhetha, ngokuqhubeka nokusetyenziswa. Zonke iziphumo ezibuyisiweyo zenzelwe umntu ngamnye.
Ungasebenzisa ifayile yakho yeRobots.txt ukucacisa ukuba ungayithanda njani iApplebot kwisalathiso sendawo yakho:
Izinto eziKhangelwe kukuKhangela kweApple
Kukho iingcebiso malunga noku sele kupapashwe yiApple. I-Apple yamkele imigangatho yeinjini yokukhangela kwaye yapapasha oku kujongwa kungacacanga kwezinto zayo ezikumgangatho wazo wokuxhasa iphepha I-Applebot okwasa:
Obanjiwe ukubandakanyeka kwabasebenzisi ngeziphumo zophando
Ukudibana kunye nokuthelekiswa kwamagama ophando kwizihloko zephepha lewebhu kunye nomxholo
Inani kunye nomgangatho wamakhonkco kwamanye amaphepha kwiwebhu
umsebenzisi imiqondiso esekwe kwindawo (idatha eqikelelweyo)
Iimpawu zoyilo lwephepha lewebhu
Ukuzibandakanya komsebenzisi kunye nokwenza kwasekhaya kuya kubonelela ngetoni yamathuba eApple. Ukuzibophelela kuka-Apple kubucala babasebenzisi kuya kuqinisekisa inqanaba lokuzibandakanya elingabenzi abasebenzisi balo bangonwabi.
IWebhu kulungiselelo lweApp
Mhlawumbi elona thuba likhulu liya kuba kunye neenkampani ezibonelela ngesicelo esiselfowuni kunye nobukho bewebhu. Izixhobo zika-Apple zonxibelelaniso lwewebhu kwizicelo ze-iOS zilungile. Kukho iindlela ezimbalwa ezinokuthi iinkampani ezineeapps ze-iPhone zisebenzise oku:
Amakhonkco endalo iphela. Sebenzisa amakhonkco kwindalo yonke ukubuyisela izikimu ze-URL zesiko nge-HTTP esemgangathweni okanye amakhonkco e-HTTPS. Amakhonkco endalo iphela asebenzela bonke abasebenzisi: Ukuba abasebenzisi bafake usetyenziso lwakho, ikhonkco libasa ngqo kwi-app yakho; ukuba abanayo i-app yakho efakiweyo, ikhonkco livula iwebhusayithi yakho kwi-Safari. Ukufunda ukuba ungazisebenzisa kanjani iindawo zonxibelelwano, jonga Inkxaso kwiLinks zonxibelelwano.
Izitshisi zeApple Smart. Xa abasebenzisi betyelele iwebhusayithi yakho eSafari, iSmart App Banner ibavumela ukuba bavule usetyenziso lwakho (ukuba lufakiwe) okanye bafumane ithuba lokukhuphela usetyenziso lwakho (ukuba alufakwanga). Ukufunda ngakumbi ngeZibhengezo zeSmart App, bona Ukukhuthaza iiNkqubo ngeZibhengezo zeSmart App.
Susa isandla. I-Handoff ivumela abasebenzisi ukuba baqhubeke nomsebenzi ukusuka kwesinye isixhobo ukuya kwesinye. Umzekelo, xa ukhangela iwebhusayithi kwi-Mac yabo, banokutsiba ngqo kwi-app yakho yemveli kwi-iPad yabo. Kwi-iOS 9 kwaye kamva, i-Handoff ibandakanya inkxaso ethile yokukhangela usetyenziso. Ukufunda ngakumbi malunga nokuxhasa i-Handoff, bona Isikhokelo seNkqubo yokuHamba.
Schema.org Iziqwengana ezityebileyo
I-Apple yamkele imigangatho yeinjini yokukhangela njengeefayile zeerobhothi.txt kunye nokumakishwa kwesalathiso. Okubaluleke ngakumbi, iApple ikwamkele Schema.org izityebi ezityebileyo ezisemgangathweni zokongeza imethadatha kwindawo yakho, kubandakanya iAggregateRating, Offers, PriceRange, InteractionCount, Organisation, Recipe, SearchAction, kunye ne-ImageObject.
Zonke iinjini zokukhangela fumana, ukhase, kwaye ukhangele umxholo wakho ngendlela efanayo, ukusebenzisa iindlela ezilungileyo zokuphumeza inkqubo yolawulo lomxholo okanye iqonga le-ecommerce kubalulekile. Ukongeza, nangona kunjalo, ukuphucula indawo yakho kunye nokusetyenziswa kweselfowuni kudityanisiwe kufuneka kuphucule kakhulu ukubanakho kwakho ukufumaneka nge-injini yokukhangela ka-Apple.
Bhalisa ishishini lakho nge-Apple Maps Connect
Ngaba unayo indawo yokuthengisa okanye iofisi apho abathengi bengingqi bafuna ukukufumana? Ukuba uyakwenza oko, qiniseka ukubhalisela i- Imephu ye-Apple Qhagamshela usebenzisa ukungena kwakho kwi-Apple. Oku akubeki nje ishishini lakho kwimephu ye-Apple kwaye wenze izikhombisi ngokulula, ikwadibanisa neSiri. Kwaye, ewe, unokubandakanya ukuba uyamkela okanye awamkeli Apple Pay.
Uyijonga njani indawo yakho ngeApple
I-Apple iyabonelela isixhobo esilula Ukuchonga ukuba indawo yakho inokufakwa kwisalathiso kwaye inee-tag ezisisiseko zokufumanisa. Kwindawo yam, ibuyisele isihloko, inkcazo, umfanekiso, uphawu lokuchukumisa, ixesha lokupapasha, kunye nefayile yeerobhothi.txt. Kuba andinayo i-mobile app, iphinde yabuya into yokuba andinayo nayiphi na into enxulumene nayo:
Qinisekisa indawo yakho ngeApple
Ndijonge phambili kuApple ngokubonelela ngeconsole yokukhangela amashishini ukulandelela kunye nokwenza ubukho babo kwiziphumo zophando zika-Apple. Ukuba banokubonelela ngemetriki yokusebenza kwelizwi leSiri, kungangcono.
Andibeki themba njengoko iApple ihlonipha ubumfihlo ngaphezulu kukaGoogle… kodwa nasiphi na isixhobo sokunceda amashishini ngokuphucula ukubonakala kwawo aya kuthakazelelwa!
tags: apileiapile botiimephu zeapileIiMaphu zeApple ziyaqhagamshelaintlawulo yeapileukukhangela iapileinjini yokukhangela yeapilei-apula ukulindaiapileiappletviOSiphoneItunesusetyenziso lweselulai safariuphando lwezwi